दुई दिनको तालिमले जुनीभरिलाई :: NepalPlus
लोग्ने मलेसिया र अरब लागे । वृद्ध सासुससुरा, साना बच्चा मात्रै छन् घरमा । खेतीपाती र घर व्यबहार कसले चलाऊने ? बुढाबुढीको स्याहार कसले गर्ने ? लोग्नेले पाल्नुपर्ने, रेखादेख गर्नुपर्ने भनिन्छ पत्नीको । लोग्नेनै घरमा नभएपछि उल्टो ति महिलाले लोग्नेका बाउ आमासमेत स्याहार्नुपरेको छ । घरको सम्पूर्ण जिम्मा महिलामाथि नै बढ्दै छ । जमिन बाँझो हुन लाग्यो । के खाने ?
धेरै ठाउँमा महिलाले यहि नियती भोगिरहेका छन् । तर यहाँ चर्चा भने सिन्धुलीका महिलाको हो । सिन्धुलीमा एक हल गोरुको मूल्य रु ६० हजार जति रहेछ । यो ट्याक्टरको मूल्य जम्मा रु ४५ हजार । गोरुले १२ महिनाको रेखदेख र पालनपोषण पछि बर्षमा एक महिना जति खेत जोत्छ । गोरु पाल्दा झन्झन् दुख भैरहने । ज्यामी पाउन दुर्लभ छ । पाउँदा ति महँगा छन् । बल्ल बल्ल पाएपनि तिनलाई सम्धी र ज्वाँईँलाई भन्दा बढी मान सम्मान गर्नु पर्दछ ।
महिलालाई यस्तो कष्ट, आर्थिक भार र ज्यामीलाई दश हात जोडेर हैरानी नहोस् भनेर हामीले दुई दिने तालिम दियौं । ट्याक्टर जोत्ने तालिम ।
हामीले दिएको तालिमबाट सीप सिकेपछी सिन्धुलीका महिलाहरूले गोरु बेचेर ट्याक्टर किन्न जुर्मुराएका छन् । घाँसपातको सदुपयोग गर्न सिक्दै छन् । दूध र मल बनाउन गाई वा भैंसी खरिद गर्ने योजना बनाउँदै छन् । यसका लागि लामो तालिम दिनै पर्दो रहेनछ । जम्मा दुई दिनको तालिमले महिलाहरुले ट्याक्टर चलाऊन जान्दारहेछन् ।
त्यसो त, यस्तो तालिम हामीले धादिङ जिल्लामापनि दिएका थियौं । दुई दिनको शिपमुलक तालीम दिएपछि धादिङ जिल्ला कल्लेरीकि चण्डिका नेपालले पनि राम्रोसँग हाते ट्र्याक्टर चलाउन जानिन् । अब उनले हली, ज्यामीको चाकरी गर्नु पर्दैन । गोरु पालनको झन्झटबाट सधैंकालागि मुक्ती लिँदैछन ।
यो साधनको प्रयोगबाट मकै छर्ने जमिनको तयारी गर्दा प्रती रोपनी रु ३०० भन्दा कम लागत पर्छ । त्यही काम गोरुबाट रु १००० भन्दा बढी लाग्थ्यो । उनले अब एक घण्टामा एक रोपनी जमिन तयार गर्दा उनको नजिकै गोरु लगाएर अर्को जमिन जोतेका हरिबहादुरले ८ घन्टामा जम्मा २.५ रोपनी जमिन मात्र जोत्न सक्छन् । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? हलोले जोतेको ठाउँमा डल्ला फुटाउन, छेउकुना खन्न र जमिनको तयारी गर्न अझ बढी खर्च लाग्छ ।
उता चण्डीका गोरुको साटो दूध दिने गाई वा भैंसी पाल्ने र दूध, दहि खाने, गोबर मल बनाएर प्राङगरिक तरिकाले खेती गर्ने योजनामा छन् । हाम्रो लागि यो भन्दा खुसी के होला ? एउटै गाउँमा, एकै ठाउँमा दुई दिनको तालिम दिँदा थुप्रै महिला ब्यवहाँरिकरुपमै लाभान्वित हुँदारहेछन । यस्तो तालिमले जुनिभरीलाई हुँदो रहेछ ! हामीले सुरु गरेको यो अभियान महिला सशक्तीकरण र नेपालको कृषि बिकासको लागि कस्तो मान्नु भएको छ ? महिला शसक्तिकरण भनेको के होला ?